အခမဲ့ဝယ်ယူခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်စွာ ၅/၁၅ ပြား Makeup Brushhes Tool Set ကိုဝယ်ပါ WoopShop®
Makeup Brushes Tool Set5/ 15Pcs
အရောင်ကိုင်တွယ် အနက်ရောင် 15pcs အဖြူ 15pcs 15pcs ရွှေ ပန်းရောင် 15pcs အနက်ရောင် 5pcs အဖြူ 5pcs 5pcs ရွှေ ပန်းရောင် 5pcs 5pcs ထ အဝါရောင် 5psc 15pcs ထ အဝါရောင် 15psc မျက်လုံး 5pcs အနက်ရောင် မျက်လုံး 5pcs အဖြူရောင် မျက်လုံး 5pcs ရွှေ မျက်လုံး 5pcs ပန်းရောင် မျက်လုံး ၅ လုံးထသည် အဝါရောင်မျက်လုံး 5psc 10pcs ရွှေ အဖြူ 10pcs အနက်ရောင် 10pcs အဝါရောင်ကဏ္ sector 10pcs ကဏ္ 10 XNUMXpcs ထ ကဏ္ pink 10pcs ပန်းရောင် ကဏ္ 10 XNUMXpcs ကိုရွှေ ကဏ္ white 10pcs အဖြူ ကဏ္ 10 XNUMXpcs အနက်ရောင် 10pcs ထ ပန်းရောင် 10pcs
အနက်ရောင် 15pcs အဖြူ 15pcs 15pcs ရွှေ ပန်းရောင် 15pcs အနက်ရောင် 5pcs အဖြူ 5pcs 5pcs ရွှေ ပန်းရောင် 5pcs 5pcs ထ အဝါရောင် 5psc 15pcs ထ အဝါရောင် 15psc မျက်လုံး 5pcs အနက်ရောင် မျက်လုံး 5pcs အဖြူရောင် မျက်လုံး 5pcs ရွှေ မျက်လုံး 5pcs ပန်းရောင် မျက်လုံး ၅ လုံးထသည် အဝါရောင်မျက်လုံး 5psc 10pcs ရွှေ အဖြူ 10pcs အနက်ရောင် 10pcs အဝါရောင်ကဏ္ sector 10pcs ကဏ္ 10 XNUMXpcs ထ ကဏ္ pink 10pcs ပန်းရောင် ကဏ္ 10 XNUMXpcs ကိုရွှေ ကဏ္ white 10pcs အဖြူ ကဏ္ 10 XNUMXpcs အနက်ရောင် 10pcs ထ ပန်းရောင် 10pcs
Makeup Brushes Tool Set - 5pcs အနက်ရောင်ပါရှိပါတယ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: နိုင်လွန်ဆံပင် + အလူမီနီယံအလွိုင်း + ပလပ်စတစ်
အရေအတွက်: 5/15 pcs
အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင် / နှင်းဆီ၊ ရွှေ၊ ပန်းရောင် / အဝါရောင်
စုတ်တံ၏အရွယ်အစား: 13-15cm / 5.12-5.9in ပတ်လည်
စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 30/45 / 90g ဝန်းကျင်
ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်အပြင်အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်ကူညီရန်ဤအစုတွင်ထူးခြားသောစုတ်တံ ၃ ခုပါဝင်သည်။
သယ်ဆောင်ရသောအိတ်ကိုသံလိုက်ဖိအားဖြင့်ကပ်ထားသောပိတ်ပစ်စတိုးဆိုင်များနှင့်ဖွင့ ်၍ လွယ်ကူစွာစုတ်တံများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အဘယ်သူမျှမဆိုးဆေး Run ကိုအတူရေချိုးနိုင်သည်။
1 * 5pcs စုတ်တံ၏ 15 * သတ်မှတ်မည်
ဒါဟာနှစ်လအကြာမှာဖြစ်ခဲ့တာအဆင်ပြေပုံရတယ်၊ မျှော်လင့်ထားတာထက်သေးငယ်တယ်။ ပုံနဲ့တူတယ်
ဂရိတ်အစုံ! စုတ်တံအမြောက်အမြား၊ ဤမျှစျေးနှုန်းအတွက်အလွန်ကောင်းပါသည် !! အရည်အသွေးကောင်း, ကျေနပ်ရောင့်ရဲ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :)
ကုန်ပစ္စည်းများသည်ခြေရာခံဖော်ပြသည့်အတိုင်းရုံးသို့ရောက်လာသည်၊ သို့သော်မည်သည့်ရုံးကိုမသိရှိရ၊ ထိုတွင်သူသည်ရက်ပေါင်း ၂၀ နေခဲ့သည်။